नेपाली भुभागबाट अपहरण शैलीमा माओवादी नेता तिवारीलाई किन लग्यो भारत ?
बिहीबार चैत्र २९ २०७४ इमरान खान
इमरान खान / २९ चैत्र
कपिलबस्तु । नेपाली नागरिकलाई कुनै देशले मुद्दा लगाएको भए उसको भूमीबाट पक्राउ गर्न सक्छ । तर, कपिलबस्तुमा नेपाली नागरिकलाई नेपाली भूमीबाटै अपहरण शैलीमा पक्राउ गरेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रिय सदस्यसमेत रहेका सुशीलकुमार तिवारीलाई भारतीय प्रहरीले सोमबार दिउँसो माओवादीको जिल्ला पार्टी कार्यालय नजिकैबाट पक्राउ गरेको छ । कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नं. ३ स्थित घरबाट पार्टी कार्यालय पुगेका तिवारी केही समयपछि सम्पर्क्विहीन भएपछि आफन्तले उनको खोजी कार्य थालेका थिए । मंगलबार दिउँसो १ बजेदेखि बेपत्ता भएका तिवारीको खोजीका लागि बुधबार दिउँसो कपिलबस्तुमा उनकी पत्नी सीताले पत्रकार सम्मेलन गरिन् । तिवारीका परिवारले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उनको खोज तलासका लागि उजुरी पनि गरेका छन् । दिनदहाडै नेपाली भूभागमा नेपाली नागरिक भारतीय सुरक्षाकर्मीको अपहरणमा पर्नुले यस क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थालाई चुनौतीसमेत थपिदिएको जिल्लावासीले गुनासो गर्न थालेका छन ।
तिवारीलाई अपहरणमा परेका तिवारी उपर भारततर्फ लागू औषधसम्बन्धी मुद्धा दर्ता भएको भारतीय प्रहरीले दावी गरेको छ । ८ वर्षअघि तिवारीलाई लागू औषध काण्डमा पक्राउ गरेको थियो । त्यसबेला अदालत लैजादै गर्दा भएको गाडी दुर्घटना हुँदा तिवारी फरार भएका थिए । त्यसयता भारतीय प्रहरीले उनको खोजी गर्दै आएको थियो । तिवारीलाई पक्राउ गर्नेलाई ५० हजार पुरस्कारको व्यवस्था पनि गरिएको दावी गरेको छ । भारतीय प्रहरीद्धारा पक्राउ गरिएका तिवारीलाई लागू औषधसम्बन्धी मुद्धा रहेको दावी गरिएको भए पनि अन्य विवरण भने खुलाएको छैन । गोरखपुर प्रहरीको निर्देशनमा सीमामा रहेको भारतीय प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । तिवारीलाई अहिले सिद्धार्थ नगर प्रहरी थानामै रहेको पत्रकार सम्मेलनमा जनाइएको छ ।
बुधबार तिवारीका आफन्तले भारतीय प्रहरीको गिरफ्तारीमा परेका सुशील तिवारीलाई रिहा गर्न आग्रह गरे । तिवारी पत्नी सीताले विना कारण अपहरण शैलीमा पक्राउ परेका आफ्ना पतिको जीवन रक्षाको अपील गरेकी छन् । सिताले आफ्नो पतिको जीवन रक्षा गरिदिन नेपाल सरकार, मानवअधिकारकर्मी र पत्रकारहरु समक्ष अपिल गरिन । ‘भारतीय प्रहरीले नेपालमा आएर अपहरण शैलीमा पक्राउ गरेको छ’ सुशीलका दाई अनिल तिवारीले पत्रकार इमरान खान सँग भने, ‘नेपाली भूमीबाट दिनदहाडै नेपाली नगारिकलाई पक्राउ गरेर लैजानु नेपालकै लागि लज्जास्पद छ ।’
तिवारी पक्राउ परेको स्थल नेपाली भूभाग हो । तौलिहवा जिल्ला प्रशाषन कार्यालयबाट १२ किलोमिटर टाढाको दुरीमा छ सीमाना । अन्तर्रा्ष्ट्रिय कानुनमा त्यसरी अर्काको भूमीमा गएर पक्राउ गर्न पाइदैन । तर भारतीय प्रहरीले नांगो हस्तक्षेप गर्दै अपहरण शैलीमा नेपाली नागरिकलाई पक्राउ गर्दा पनि नेपाली प्रशाषन भने मौन देखिएको छ । यसले नेपालको सुरक्षा व्यवस्था कमजोर रहेको आँकलन त्यसै पनि गर्न सकिन्छ ।
कपिलबस्तु बहुमुखी क्याम्पसमा लागू औषध तथा ट्राफिक सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न
नयाँ वर्ष २०७५ पोखरामा पर्यटकले भरिभराउ
बुटवलको भाटभटेनीमा लागेको आगो चार घण्टापछि नियन्त्रणमा
कपिलवस्तुमा बिदाका दिन अनुमति बिना सरकारी सवारी साधन चलाउन नपाईने
मन्त्री चक्रपाणी खनाललाई गृह जिल्लामा गरे भव्य स्वागत ( हेर्नुहोस भिडियो )
नेकपा द्वारा दमनको बिरोध